Isahluko se-3188 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online | XperimentalHamid
Isahluko se-3188 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Juni 13, 2021 Juni 13, 2021 by Qasim Khan
funda Isahluko 3188 yenoveli Unyana omangalisayo eMthethweni by INkosi igqabi simahla kwi-Intanethi.
ULenan wanqwala kancinci, emva koko wajonga uMarven, wazibamba ngeenyembezi, wathi: “Marven, andazi ukuba ndingakubulela njani…”
UMarven wancuma wathi, “Makazi, ungoyena ugqibeleleyo. Ukuhlala wonwabile kubomi bakho obude ngumbulelo kum. ”
ULenan wachukumiseka kakhulu entliziyweni yakhe. Ngelixa esosula iinyembezi emehlweni akhe, wanqwala kwaye wathi ngokunyanisekileyo:
“Ewe… Ndizakuba neminyaka elikhulu ubudala… Ndinabantwana abalungileyo abafana nawe noSara.”
“Mna noMalume wakho kufuneka senze konke okusemandleni. Ukuphila ixesha elide ngamandla ethu onke, ngenye imini kuya kuba yilahleko enkulu… ”
UMarven wakhawuleza wathi ngeli xesha:
“Malume noSara, nawe khawuleza useze iiglasi ezimbini eziseleyo!”
Aba babini babuyela ezingqondweni, kodwa kokukhona baqonda ukuba umlingo wale glasi yamanzi, kokukhona babethandabuza.
USara wayehlala enoluvo lokuba usapho lwakhe lwabathathu lunetyala kakhulu kuMarven, ke wazama ukuthi,
“Marven, kungcono ndingaseli. Ndimncinci kwaye kuyinkcitha-xesha kum ukusela. ”
UMarven wambetha ebusweni wathi: “Ukuba awuseli, ndiza kuyilahla.”
Emva koko, wolule isandla wathatha enye yeekomityi zamanzi, wenza ngathi uzokuzigalela emhlabeni.
USara wothuka, esoyika ukuba angayilahla into exabiseke kangaka, ke yena ngokungaqondakaliyo wathi:
“Musa ukuphosa, musa! Marven, andinakuyisela? ”
Wamnika iglasi yamanzi, wathi kuye: “Khawuyeke ukuthetha ububhanxa uze usele ngoku.”
USara wanqwala, wathatha iglasi yamanzi kuye ngezandla zozibini, wamjonga ngothando, wathi emphefumlweni, "Enkosi, Marven!"
Wathambisa iitempile zakhe kwaye wancuma kabuhlungu.
UFilipu ecaleni naye waqonda ukuba ukuba nembeko kakhulu kunokwenza uMarven azive elahliwe, ke naye wathatha iglasi yamanzi yokugqibela wathi kuSara:
“Sara, obu bububele bukaMarven kuthi, masithethe ngabo. , Sonke siyintsapho, makangacingi ukuba sikude kakhulu. ”
USara wanqwala kancinci wasebeza wathi: “Tata, ndiyazi…”
UFilipu wancuma wathi, "Yiza, utata uza kwenza into encinci kunye nawe. Masisele kunye! ”
Ngokukhawuleza uSara wayiphakamisa indebe yamanzi, wagcoba ngendebe kaFilipu, emva koko waqweba isibindi wasela.
UFilipu wayesele efumene imvakalelo yokubuyela umva ngexesha, ke wathi akuba namava kwakhona ngeli xesha, nangona intliziyo yakhe yayinemincili, akazange othuke.
Nangona kunjalo, uSara wamangaliswa kwaye akakwazi nokuthetha.
Kuba, ebengalindelanga ukuba emva kokusela le glasi yamanzi, umzimba wakhe uyakutshintsha ngokungummangaliso.
Imvakalelo yomntu wonke ifana nokubuyela kuye xa wayeneminyaka elishumi elinesibhozo ubudala.
Khange akuncede ukuvala amehlo, ukuziva ngononophelo lonke utshintsho olwenzekileyo emzimbeni wakhe, kwaye wacinga kuye:
"Ukuba bendingayazi impembelelo yale glasi yamanzi ixesha elide, nokuba umntu ebendixelele ukuba ndibuyele kwiminyaka emithandathu okanye esixhenxe ubuyile, ngokuqinisekileyo andinakuyithandabuza…"
Isahluko esilandelayo 3189
Iingcinga ezi-6 kwi "Isahluko 3188 soNyana oMangalisayo eMthethweni kwiNoveli yasimahla kwi-Intanethi"
Juni 13, 2021 kwi-10: 24 PM
Kwaye irekhodi elikhangela uMarven khange liphantse limbhatalele ubomi bakhe, wayegula yiyo yonke loo nto, kwaye uMarven uyibuyisile loo nto ngokumphilisa nangokumnika ithuba kwakhona ebomini, ndiyakholelwa ukuba oyena mfazi ungumfazi kunye naye nguClaire kwaye uya kuhlala enjalo
Juni 13, 2021 kwi-10: 19 PM
Asinguye wonke umntu othandana naye ekuboneni kuqala, ubuncinci xa ngokucacileyo unekamva elingcono kwaye wanyanzelwa ukuba utshate nomntu ongamaziyo, okanye onokunxibelelana naye, hayi kwezemfundo, jonga, inqanaba okanye imvelaphi, uhlaziswa kwaye uphathwe Inkunkuma, ngenxa yakhe, akazange akhalaze kube kanye okanye ade acinge ukuba uqhawula umtshato, uMarven umtyala ngaphezu kobubele, unyanisekile ngokupheleleyo, ukunyaniseka nothando olungagungqiyo, njengokuba emnikile yonke le minyaka
Juni 13, 2021 kwi-9: 30 PM
Imaf kapan lanjutannya… suka sama alur ceritanya
Juni 13, 2021 kwi-2: 58 PM
Kuya kuba mnandi ukuba uSara noMarven baphela kunye ekugqibeleni. Kum iimvakalelo zika-Avella ngoMarven ngeloxesha nangoku, zazingathandani. Ku-Avella ibububele nje kwaye ulandela nje iminqweno kaTatomkhulu wakhe, ebeyinyani. Ukuba ibiluthando, ngeba babenabantwana kule minyaka mine. UMarven, unetyala kuye ububele obufanayo, kodwa hayi uthando. USara kwelinye icala, banesivumelwano. USara nabazali zange bayeke ukumkhangela, kwaye iphantse yabiza ubomi bukaPhilip Gu. Ngakolunye uhlangothi, uSara wangena kwishishini hayi ngenxa yakhe okanye ngodumo, kodwa ukufumana uMarven. Lowo ngumbingelelo wenene.
UWALTER ALPHONSO HARPER JR
Juni 13, 2021 kwi-11: 31 PM
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe. USara kunye nosapho kubonakala kumangalisa.
Juni 13, 2021 kwi-8: 50 AM
Enkosi ngebali, ndijonga amaxesha amaninzi ngemini yokuhlaziya kwaye ndonwabe kakhulu xa kukho amaphepha amatsha. ENKOSI!!!